कस्ता मानिसलाई हर्टअट्याक हुने खतरा हुन्छ ? पढेर जानकारीको लागी सेयर गरौं ! | सुदुरपश्चिम खबर
अहिले धेरैलाई उच्च र’क्तचाप छ, मो’टोपन छ, का’लेस्ट्रोलको सम’स्या छ । यी सम’स्याहरुले हृद’यघा’तको जो’खिम बढाएको छ । त्यसैपनि जाडो मौसम मु’टु रो’गीका लागि अ’नुकुल मानिदैन ।
वाह्य चि’सोको कारण नसा’हरु खुम्चने वा साँ’घुरिने हुन्छ । यसले र’क्त प्रवाहमा कठि’नाई ल्याउँछ । जसको सोझो भार, मु’टुमाथि पर्छ । यस्ता अनेक कारण छन्, जसले जाडोमा हृ’दयघा’तको जो’खिम बढाउँछ ।
मु’टुमा र’गत पुर्याउने न’लीमा अव’रोध भएमा मानिसलाई हृ’दयाघा’त हुने गर्छ । र’क्तनली’का विशेषगरी तीनवटा कारणले अवरोध सिर्जना हुने गर्छ ।
– र’क्तनलीमा बो’सो जमेमा (न’ली फु’टेमा – र’क्तचाप बढेर मु’टुमा असर परेमा हृद’यघा’तको संकेत सामान्यत के मानिन्छ भने छा’तीमा तिब्र दु’खाइ हुनु नै हृ’दयघा’तको संकेत हो । यद्यपि यति मात्र हृ’दयघा’तको संकेत होइन । हृ’दयघा’त हुनुअघि नै छा’लामा केही अरु संकेत देखापर्छ, जसलाई पहिचान गरेर हामी सर्तक रहन सक्छौं ।
मु’टुको स्वा’स्थ्य गडब’ड भएपछि छा’लामा अनेक किसिमका संकेत देखिन थाल्छ । उक्त सं’केतलाई पहिचान गरेर बेलामै स’र्तक रहेपछि संभावित ख’तराबाट बच्न सकिन्छ । श’रीरको अचानक जुनसुकै भागमा स(सना बि’बिरा आउँछ भने यसबाट बुझ्न सकिन्छ तपाईंमा हृद’य रो’ग छ । यस्तो बि’बिरा श’रीरमा को’लेस्ट्रोलको स्तर बढेपछि देखिन्छ । त्यसैले अचानक देखिने यस्ता बि’बिरापछि केही सा’वधान भने रहनुपर्छ । दुबै आँ’खाको छेउमा सेतो(पहेंलो चिप्रा जस्तो देखिन्छ ।
कसै कसैमा यो चिप्रा जमेको मैन बत्ती जस्तै पनि देखिन्छ । आँ’खाका साथै यस्तो चि’प्रा हा’त र खु’ट्टामा पनि देखापर्न सक्छ । यदि तपाईंमा यस्तो संकेत देखिए तपाईंको को’लेस्ट्रोल नियन्त्रण भएको छैन । यसले कुनैपनि बेला हृ’दयघातको जोखिम निम्त्याउँछ ।यदि तपाईंको श’रीरको कुनैपनि भागको छा’लामा नीलो वा बजैनी रं’गको देखिन्छ भने सावधान हुनुहोस्, किन भने यो अ’स्वस्थ्य मु’टुको संकेत हो । यस्तो ल’क्षण धेरैजसो खु’ट्टाको औं’ला आसपासमा देखापर्छ ।
छा’लामा नि’लो, बै’जनी निशानाको अर्थ हो कि तपाईंको श’रीरको कुनै भागमा र’गत जमेको छ र पर्याप्त अ’क्सिजन पुगिरहेको छैन । धमिनीमा र’गत जम्मा हुँदा ध’मनी ब्लक हुन्छ, जो हृद’यघातको कारण बन्न सक्छ । यदि तपाईंको औं’लाको माथिल्लो भाग सुन्निएमा यो पनि हृ’दयघा’तको पूर्व संकेत हुनसक्छ । सामान्यत न’ङको भाग सुन्निनु भनेको मु’टुमा सं’क्रमण भएको वा अरु रो’ग भएको संकेत हो । कहिले काहीँ फो’क्सोको स’मस्याले पनि यस्तो लक्षण देखाउँछ ।
यद्यपि यी सबै संकेत हृ’दघा’तको कारण बन्न सक्छ । अचानक तपाईंको औं’लामुनी निलो वा बैजनी रं’गको नि’शाना देखियो भने सा’वधान रहनुहोस् । यसले पनि हृ’दय रो’गको संकेत गर्छ । हुन त यस्तो नि’शान चोटको कारण पनि देखापर्न सक्छ । यद्यपि कुनै चो’टपटक लागेको छैन भने तुरुन्तै चि’कित्सककहाँ पुग्नुपर्छ । यदि तपाईंको हा’त वा खु’ट्टाको औं’लामा स(सना घा’उ ख’टिरा जस्तो देखिन्छ र यो दुख्ने किसिमको छ भने यसले पनि हृ’दय रो’गको संकेत गर्छ ।